Dalkii ugu Quwada waynaa Dunida ayaa hadda loo Gurmanaya “Waa Mareekanka oo Caawinaad ubaahan iyo dalal deeqo gaarsiiyay”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Diyaarad Xamuul oo ay Milliteriga Raashiya leeyihiin ayaa ku sii jeeda dalka Maraykanka, si ay u gaarsiiyaan Qalabka iyo Daawooyinka looga hortago Caabuqa COVID 19 oo horey ay dad ugu geeriyoodeen Maraykanka.
Hadal ka soo baxay Wasaaradda Difaaca ee Raashiya waxaa lagu sheegay inay direen Diyaarad Xamuul oo nooceedu yahay Antanov 124, taasi oo lagu raray Shixnad isugu jirta qalabka lagu xirto afka iyo sanka ee Maaskarada Daawadeysan iyo Qalab kale.
Sarkaal sare oo hadlay Maraykanka ayaa sheegay in ay rajeynayaan inay Dowladda Raashiya u soo diri doono qalabka badbaadinta qofka iyo Daawooyinka loo adeegsado Ka-hortaga COVID 19.
Tirada Guud ee dadka Maraykanka ee uu ku dhacay Caabuqaasi waxay gaarayaan 188,547 qof, halka ay ugu yaraan 3,873 kalena ay u geeriyootay.
Maraykanka ayaa ka mid ah dalalka saamaynta ugu badan uu ku yeeshay xanuunka Covid-19 waxaana Maamulka Donald Tramp uu dalbaday gar gaar bini Aadamino oo dheeraad ah si loo caawiyo Kumanaanka reer Maraykan ee Xanuunku soo ritay.
Previous articleDAAWO:- MD Farmaajo oo ku dhawaaqay Baroordiiq loo Sameynayo R/Wasaarihii hore ee Dalka.
Next articleDAAWO:- DFS oo Beenisay in ay jiraan Dad la xaqiijiyay inay qabaan Coronavirus in ay ku sugan yihiin Somaliland.